OMN: Xiyyeeffannaa (Sad.13, 2019) - Kichuu
HomeAfaan OromooTVOMN: Xiyyeeffannaa (Sad.13, 2019)
Jeeyni haqa qabu mataa gad hin qabu!!!
Oromoo: ammaan booda kaayyoo qabsoo keeti fixaan baasuu qofaatu si baasa! Waliin dhaabbadhu…ofiin dhaabbadhu! Warra gabrummaa jalatti si qabuu barbaadu hin dhagayin…sirni kun badee dhabamu malee galma hin geesu…haala amma mul’ataa jiru kanaan gabrummaa bifa addaa jalatti kufna…saniifu saba keenyaa fi biyya teenya kabbachiisuun yeroon isaa amma…tiruun bulte dhagaa taati…gabrummaa bifa harayaan lafa qabachuuf machaawaa jirtu hundeen buqqisuun ganamaani….Ibbidda si gubaa jiru laala isaa namni sitti himuu hin qabu…ofii keetif qolladhu…
Haalli keessa jiru hamaa tahuus…karaan bakka hawwine ittiin geenyu yeroo kamuu daran ifa tahee mul’achaa jira…eenyu akka nu miidhu eenyu akka nu waliin dhaabbatu barree jirra. Waanin isiniif dhaamuu barbaadu…waan kaleessa keessa dabare fi waan amma keessa jiru hamilee ittiin jabeeyfachaa… waan boru taane argamuun nurra jiru qofa irratti xiyyeefachuu dha.
Mataa ol qabadhaa…qabsootu tana qaba. Injifanoon teenya immimaan keenya nurraa qoorsiti…madaa teenyaas ni fayyisti!